WINDOWS7ကို INSTALL လုပ်သည့်အခါတုံ့ပြန်နှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်း SET ရပ် - WINDOWS ကို - 2019
သငျသညျကို reinstall လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် operating system ကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်, ဒါပေမယ့် Windows7ကိုဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်စတင် Hang install လုပ်ပါလျှင်, သင်တို့ကိုငါအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ နှင့်ယခုဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်အတိအကျဘာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပို။
သည်, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အပြင်သရုပ် - ဝင်း7client ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါကငါမကြာခဏကွန်ပျူတာများပြုပြင်အခါအစောပိုင်းက, ဘာမျှမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ပျက်အပြာရောင် setup ကိုမျက်နှာပြင်၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက်, ကမ္ပည်းစာ "တပ်ဆင်ခြင်း Start" ဘယ်မှာအခြေအနေကိုနှငျ့ရငျဆိုငျ ထိုသို့တပ်ဆင်ချိတ်ဆွဲကြောင်းထွက်လှည့်။ ဤအသိပညာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွလာပေမယ့် ((ထို hard drive ကိုမှအပျက်အစီး၏အမှု၌ မှလွဲ. နှင့်ပင်အချို့လက္ခဏာတွေခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်) များသောအားဖြင့် 10 ဦးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့ Windows7ကို install လုပ်ဖို့မိနစ် 20 ၌ရှိသမျှသောနောက်တစ်ဆင့်သို့ပြောင်းရွှေ့ထားပြီး - သို့ရာတွင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ -) ပဲပေါ်မယ့်အရာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးတစ်ကြိမ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တပ်ဆင်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ သို့သော်အခြေအနေကတညျ့နိုငျသညျ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows ကို Install လုပ် - အားလုံးညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်း ..
ရှည်လျားသည် Windows7installation ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်လာသောအဘယ်ကြောင့်
Long ကတပ်ဆင်ပေးတဲ့ dialog ပေါ်လာပါ
အဆိုပါဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူ disc ကိုပျက်ဆီးနေသောအနည်းဆုံး - (ကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူပေမယ့်များသောအားဖြင့်ရလဒ်မပြောင်းပါဘူးင်) ကပ်။
ကွန်ပျူတာ hard drive ကိုပျက်ဆီးနေသော (ရှားပါးပေမယ့်ဖြစ်ပျက်) ။
စသည်တို့ကိုကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူတစ်ခုခု, မှတ်ဉာဏ်, - ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်အခြားထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းရှာဖွေရေးမှာခွင့်လည်းမရှိလျှင်။
BIOS ကို setting များကို - ဤများအတွက်အကြောင်းပြချက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်, ဤအချက်ဖြစ်ပါသည် - check လုပ်ထားသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင် optimized က default settings ကို, ဒါမှမဟုတ်ပဲ default settings ကိုထားလျှင် - ကများသောအားဖြင့်မကူညီဘူး, ပြောင်းလဲမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အဓိကအချက်, ကတည်းကကြောင့်သိသာမဟုတ်ပါဘူး။
Windows ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တပ်ဆင်စတင်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး အကယ်. သင်က, အာရုံစိုက်သင့်တယ်သော BIOS ကိုဆက်တင်ပေါ်တွင်
Windows7OS ကိုတပ်ဆင်၏ပထမအဆင့်ဆင့်၏အမြန်နှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုနှစ်ခုမူလတန်း BIOS ကို setup ကိုကို item ရှိပါတယ် - ဖြစ်ပါသည်:
serial ATA (SATA) Mode ကို - က AHCI တပ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည် - က Windows7installation ကို၏မြန်နှုန်းကိုတိုးပွါးစေမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းတိတ်တဆိတ်ပေမယ့်အနာဂတ်အတွက် operating system ကိုအရှိန်မြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ (သင်နေတုန်းပဲရှိသည်, စနစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပါကတစ်ဦး IDE interface ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီး hard drive တွေအဘို့သက်ဆိုင်သောမဟုတ်) ။
BIOS ကိုအတွက် floppy drive ကို (Floppy Drive ကို) Disable သငျသညျဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကြောင်းပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်နှင့်အသင်တစ်ဦးစာရေးကိရိယာကို PC ရှိပါကပြုလုပ်ဖွယ်ရှိသည်: - အများဆုံးမကြာခဏဤအကြောင်းအရာအားပိတ်ရန်လုံးဝငါသည်သင်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သော drive ကိုအများရှိသော်လည်း,, BIOS ထဲမှာမရှာကြဘူးသည်ကိုသင်တို့သိ Windows7၏ installation ကို၏အစအဦးမှာအေးခဲဖယ်ရှားပေး ဒီ drive ကိုသင် BIOS ကိုဖွင့်ပါပွီ။
အခုတော့အဲဒီ settings ကိုပြောင်းလဲရန်မည်သို့မည်ပုံပြသသော BIOS ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏ပုံရိပ်များ။ , BIOS ထဲမှာသွားကြဖို့ကိုဘယ်လို, ငါသင်သိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် - သူကတစ်နည်းနည်းနဲ့ကို USB drive ကိုသို့မဟုတ် disk ထဲက boot ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုံရိပ် - ထို floppy disk ကို drive ကိုကို disable
ပုံရိပ် -, BIOS ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက် SATA များအတွက် AHCI mode ကိုဖွင့်ပေးခြင်း
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, ဤပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးကိုကူညီရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်မပါဘူးဆိုရင်အစောပိုင်းကဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့အဖြစ်, ထို့နောက်ထိုအချိန်လေးအာရုံစိုက် - အမည်ရ, ဝန်ဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ် flash drive ကိုနှင့် DVD ကိုဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အ drive ကိုနှင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard disk ကို၏အခြေအနေ။ သင်တို့သည်လည်းသော်လည်း, ဤ option, သင်တန်း, ဝေးအကောင်းဆုံးထဲကနေဖြစ်ပါတယ်, Window7၏ installation စတင်ကထဲကပြီးသားပြီးတော့ Windows7ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဖြူးသုံးပြီးကြိုးစားကြည့်, ဒါမှမဟုတ်တနည်း, Window XP ကို ​​install လုပ်ရန်နှင့်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောကံ! သင်ကူညီလိုလျှင်, အောက်ခြေမှာခလုတ်မှတဆင့်လူမှုကွန်ယက်အချို့မျိုးအတွက်မျှဝေဖို့မမေ့မလြော့ပါ။